Manohitra hatrany ny fanomezana tany hampiasain’ny orinasa Tozzy Green ny vahoaka any an-toerana, ka tsy havelan’izy ireo hiasa ity orinasa ity. Naka mpitandro filaminana kosa etsy an-kilany ny orinasa hanakana ny vahoaka tsy hanohintohina azy ireo. Na inona na inona ataon-dreo dia tsy homenay ny tany, ka noho izany dia manao antso avo amin’ny fitondram-panjakana, fa tena tsy mety amin’ny filan’ny vahoaka madinika ny Tozzy Green, hoy ny antso avo. Matoa anefa ity orinasa ity afaka niasa dia nisy ny fifanarahana tamin’ny fanjakana. Tsy nisy ve izany ny fierana sy ny fakana ny hevitry ny vahoaka ? Sa kosa tsy tsapan’ny olona ny tamberina avy amin’ity orinasa ity amin’ny fiainana ara-tsosialin’ny vahoaka eo an-toerana ? Tsy vao izao anefa ny orinasa no nijoro sy niasa, fa efa hatry ny ela no niasa, saingy misy ny fifanolanana amin’izao. Ahiana ny fifandonana mafy, raha tsy misy ny fidirana an-tsehatry ny fanjakana mijery sy mandamina ifotony ny raharaha.